သနျးကွှယျသူဌေးကွီး၏ လှယျကူသော စီးပှားရှာနညျး - Amawpyay
ဟိုတယျတှငျ လခစား လုပျကိုငျနသေော လူငယျတဈယောကျသညျ စီးပှားရေးစာအုပျမြား သူငှေးဖွဈနညျးစာအုပျမြားကို အမွဲဖတျနသေျောလညျး တကယျကွီးပှားအောငျ မညျသို့ စပွီးလုပျရမှနျးမသိ ဖွဈနသေညျ။
တဈနေ့၌ ခရီးသှားလုပျငနျး ဦးဆောငျနသေော သနျးကွှယျ သူငှေးကွီးသညျ အမှတျမထငျ သူငှေးဖွဈနညျးစာအုပျဖတျနသေော လူငယျအား ‘ကောငျလေး’ မငျး တဈရကျ တဈသိနျးစုရငျ နှဈပေါငျး သုံးဆယျဆိုရငျ မငျးဘယျလောကျပိုငျပွီလဲ?
လူငယျက အတနျကွာ တှကျခကျြနခေိုကျသူးငှေးကွီး က တဈရကျ တဈသိနျး နှဈပေါငျး သုံးဆယျဆိုရငျ သိနျးတဈသောငျးကြျော ဆိုတော့ မငျး အသကျ အခု နှဈဆယျပဲဆိုရငျ နောကျအသကျ ငါးဆယျလောကျမှ ဒီပိုကျဆံ ပိုငျဆိုငျရမှာ။ဒါတောငျ သနျးကွှယျသူငှေး မဖွဈနိုငျသေးဘူး။ကောငျလေးက ဒါဆိုကနြျော ဘာလုပျရမလဲ?
တဈရကျ တဈသိနျးမပွောနဲ့ တဈလတဈသိနျးတောငျ မစုနိုငျဘူး။အလုပျထှကျရမှာလား။မငျးအလုပျမထှကျသေးပါနဲ့။သူငှေးကွီးက မငျးတဈလ ငါးသောငျး တဈနှဈ ငါးသိနျးလောကျ ပဲ စုနိုငျအုနျး။ မငျးလုပျငနျးတဈခုစလို့ ရပွီ ။ဟုတျပွီ မငျးရှိတဲ့ ငါးသိနျးလေးနဲ့ ကှမျးယာဆျိုငျလေး ပဲ ဖှငျ့မလား ။စိတျခရြတဲ့ လူယုံရှိရငျ လှဲပေးလိုကျ ။
လစဉျ အမွတျငှေ သှားကောကျရုံပဲ။’အလုပျဟူသမြှ ဂုဏျရှိစှ တဲ့ကှ’မငျးဆိုငျက ရတဲ့အမွတျငှနေဲ့ ထပျလုပျခငျြသေးတယျ ဆိုရငျ အခွားအလုပျ ဖွဈတဲ့ ဆိုငျကယျ Taxiထောငျပွီးကိုယျတိုငျ မဆှဲရငျတောငျ owner ကွေးလေးယူပွီး ငှားစားပေါ့ကှာ။မငျးအစီးရေ အမြားကွီး ငှားထားပေးရငျ သူမြားတှကေိုလညိးကူညီ ရာရောကျ တယျ
ကိုယျ့အတှကျလညျး အဆငျပွရော ရောကျတာပေါ့။ကဲ ထပျလုပျအုနျးမယျကှာ မိတ်တူ စကျလေးတဈလုံးလောကျ ဝယျထားလိုကျ ဆယျသိနျးပဲ ထားပါအုနျး ကြောငျးစာမေးပှဲရှိရငျ ခဏလေးနဲ့ အရငျးကတြေယျ စကျတဈလုံးကနေ နှဈလုံး ပွီးတော့ ကှနျပြူတာလေးထောငျ
စာရေးမလေး ငှားထားလိုကျ တျောတျောလေး အောငျမွငျလာပွီဆိုရငျ မငျးအမွတျငှတှေေ မငျးလုပျငနျးအစုံက လိုကျကောကျရုံပဲ။မငျးကို မှီပွီး နထေိုငျရတဲ့ မိသားစု ဘယျလောကျတောငျမြားသှားပွီလဲ။မငျးဖတျနတေဲ့ စီးပှားရေးစာအုပျထဲက အတိုငျး’ခွငျတဈလုံးထဲ ကွကျဥတှအေားလုံးမထညျ့နဲ့’ ဆိုတဲ့ အတိုငျး ပေါ့ကှာ။
လုပျငနျးတှမြေားလာတော့ တဈခုပကျြစီးလညျး မကွောကျရတော့ဘူးပေါ့။စီးပှားရေးလုပျတယျဆိုတာ အဆတိုးပှားနညျးနဲ့ လုပျရတယျ။ဒီလိုမရှာနဲ့1+2+3+4+5+6+7+8+9=45ဒီလိုရှာ 1×2=2×2=4×4=16×16=256×256=65536ကဲ ငါတော့ကှာ ဒီလိုအသေးအဖှဲလေးတှေ မလုပျတော့ဘူး
အကွီးကွီးတှပေဲ ခတြော့မယျဆိုလညျး လလေ့ာ ပေါ့ကှာ ကြောကျမွတျရတနာရောငျးဝယျခငျြတာလား ကြောကျ အကွောငျး ကောငျးကောငျးသိရမှာပေါ့ကှာ။ခရီးသှားလုပျငနျးပဲ လုပျကိုငျတော့မှာလား.?ခရီးစဉျတှေ အကွောငျး တိတိကကြ တှကျခကျြ ပွောဆိုနိုငျရမှာပေါ့ကှာ။
သူငှေးက အပွောကွီး လိုကျတာ သုညက ပွနျစဆိုလညျး ပွနျစဖို့ အဆငျသငျ့ပါကှာ။မငျးအသကျလောကျက ငါ တိုကျခနျးငါးခနျးလောကျ ပိုငျနပွေီ။မငျးနောကျမကသြေးပါဘူး။ကောငျလေး မငျးမှတျထားရမှာက သူငှေး တဈယောကျဖွဈခငျြရငျ ဆုံးဖွတျရဲရမယျကှ…
မှတျခကျြ။ ။သနျးကွှယျသူငှေးကွီး ပွပွေခဲ့သော စကားကို ကွီးပှားခမျြးသာခငျြသော သူငယျခငျြးမြားအတှကျ ရေးသားဖျောပွသညျ။ သိစလေိုသောစိတျဖွဈရေးသားခဲ့သောကွောငျ့ မပွညျ့စုံမှု မှားယှငျးမှု ရှိခဲ့ပါက ကနြျော အပွဈသာ ဖွဈသညျ။
သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး၏ လွယ်ကူသော စီးပွားရှာနည်း
ဟိုတယ်တွင် လခစား လုပ်ကိုင်နေသော လူငယ်တစ်ယောက်သည် စီးပွားရေးစာအုပ်များ သူငှေးဖြစ်နည်းစာအုပ်များကို အမြဲဖတ်နေသော်လည်း တကယ်ကြီးပွားအောင် မည်သို့ စပြီးလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေသည်။
တစ်နေ့၌ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဦးဆောင်နေသော သန်းကြွယ် သူငှေးကြီးသည် အမှတ်မထင် သူငှေးဖြစ်နည်းစာအုပ်ဖတ်နေသော လူငယ်အား ‘ကောင်လေး’ မင်း တစ်ရက် တစ်သိန်းစုရင် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ဆိုရင် မင်းဘယ်လောက်ပိုင်ပြီလဲ?
လူငယ်က အတန်ကြာ တွက်ချက်နေခိုက်သူးငှေးကြီး က တစ်ရက် တစ်သိန်း နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ဆိုရင် သိန်းတစ်သောင်းကျော် ဆိုတော့ မင်း အသက် အခု နှစ်ဆယ်ပဲဆိုရင် နောက်အသက် ငါးဆယ်လောက်မှ ဒီပိုက်ဆံ ပိုင်ဆိုင်ရမှာ။ဒါတောင် သန်းကြွယ်သူငှေး မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ကောင်လေးက ဒါဆိုကျနော် ဘာလုပ်ရမလဲ?
တစ်ရက် တစ်သိန်းမပြောနဲ့ တစ်လတစ်သိန်းတောင် မစုနိုင်ဘူး။အလုပ်ထွက်ရမှာလား။မင်းအလုပ်မထွက်သေးပါနဲ့။သူငှေးကြီးက မင်းတစ်လ ငါးသောင်း တစ်နှစ် ငါးသိန်းလောက် ပဲ စုနိုင်အုန်း။ မင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုစလို့ ရပြီ ။ဟုတ်ပြီ မင်းရှိတဲ့ ငါးသိန်းလေးနဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်လေး ပဲ ဖွင့်မလား ။စိတ်ချရတဲ့ လူယုံရှိရင် လွဲပေးလိုက် ။
လစဉ် အမြတ်ငွေ သွားကောက်ရုံပဲ။’အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ တဲ့ကွ’မင်းဆိုင်က ရတဲ့အမြတ်ငွေနဲ့ ထပ်လုပ်ချင်သေးတယ် ဆိုရင် အခြားအလုပ် ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ကယ် Taxiထောင်ပြီးကိုယ်တိုင် မဆွဲရင်တောင် owner ကြေးလေးယူပြီး ငှားစားပေါ့ကွာ။မင်းအစီးရေ အများကြီး ငှားထားပေးရင် သူများတွေကိုလညိးကူညီ ရာရောက် တယ်
ကိုယ့်အတွက်လည်း အဆင်ပြေရာ ရောက်တာပေါ့။ကဲ ထပ်လုပ်အုန်းမယ်ကွာ မိတ္တူ စက်လေးတစ်လုံးလောက် ဝယ်ထားလိုက် ဆယ်သိန်းပဲ ထားပါအုန်း ကျောင်းစာမေးပွဲရှိရင် ခဏလေးနဲ့ အရင်းကျေတယ် စက်တစ်လုံးကနေ နှစ်လုံး ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာလေးထောင်
စာရေးမလေး ငှားထားလိုက် တော်တော်လေး အောင်မြင်လာပြီဆိုရင် မင်းအမြတ်ငွေတွေ မင်းလုပ်ငန်းအစုံက လိုက်ကောက်ရုံပဲ။မင်းကို မှီပြီး နေထိုင်ရတဲ့ မိသားစု ဘယ်လောက်တောင်များသွားပြီလဲ။မင်းဖတ်နေတဲ့ စီးပွားရေးစာအုပ်ထဲက အတိုင်း’ခြင်တစ်လုံးထဲ ကြက်ဥတွေအားလုံးမထည့်နဲ့’ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ပေါ့ကွာ။
လုပ်ငန်းတွေများလာတော့ တစ်ခုပျက်စီးလည်း မကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့။စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အဆတိုးပွားနည်းနဲ့ လုပ်ရတယ်။ဒီလိုမရှာနဲ့1+2+3+4+5+6+7+8+9=45ဒီလိုရှာ 1×2=2×2=4×4=16×16=256×256=65536ကဲ ငါတော့ကွာ ဒီလိုအသေးအဖွဲလေးတွေ မလုပ်တော့ဘူး
အကြီးကြီးတွေပဲ ချတော့မယ်ဆိုလည်း လေ့လာ ပေါ့ကွာ ကျောက်မြတ်ရတနာရောင်းဝယ်ချင်တာလား ကျောက် အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိရမှာပေါ့ကွာ။ခရီးသွားလုပ်ငန်းပဲ လုပ်ကိုင်တော့မှာလား.?ခရီးစဉ်တွေ အကြောင်း တိတိကျကျ တွက်ချက် ပြောဆိုနိုင်ရမှာပေါ့ကွာ။
သူငှေးက အပြောကြီး လိုက်တာ သုညက ပြန်စဆိုလည်း ပြန်စဖို့ အဆင်သင့်ပါကွာ။မင်းအသက်လောက်က ငါ တိုက်ခန်းငါးခန်းလောက် ပိုင်နေပြီ။မင်းနောက်မကျသေးပါဘူး။ကောင်လေး မင်းမှတ်ထားရမှာက သူငှေး တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် ဆုံးဖြတ်ရဲရမယ်ကွ…
မှတ်ချက်။ ။သန်းကြွယ်သူငှေးကြီး ပြေပြခဲ့သော စကားကို ကြီးပွားချမ်းသာချင်သော သူငယ်ချင်းများအတွက် ရေးသားဖော်ပြသည်။ သိစေလိုသောစိတ်ဖြစ်ရေးသားခဲ့သောကြောင့် မပြည့်စုံမှု မှားယွင်းမှု ရှိခဲ့ပါက ကျနော် အပြစ်သာ ဖြစ်သည်။